एआईजी थप्न दौडधुप | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
एआईजी थप्न दौडधुप
प्रकाशित मिति ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ११:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका उच्चपदमा शक्तिकेन्द्रबीच कति धेरै टसल हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल प्रहरीमा रोकिएको डीआईजी बढुवाबाट प्रष्ट हुन्छ । शक्तिकेन्द्रहरुको स्वार्थ बाँझिदा महिनौंदेखि रिक्त रहेको डिआईजीको एक पदमा बढुवा हुनसकेको छैन ।
डिआईजी बढुवाको लडाई तत्काल हल नहुने देखेपछि दुई महिनाअघि गृहले त्यसलाई थाँती राखेर तल्लो तहको बढुवा निकालेको थियो । भावी आईजीपीका दाबेदारहरुको लडाईका कारण डिआईजी बढुवा हुन नसकेको हो । शक्तिकेन्द्रले जसरी पनि विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्ने अडान राखेपछि विवाद भएको हो । जबकि पोखरेलको ब्याचभन्दा अगाडिका एसएसपीहरु बढुवा भएका छैनन् ।
विवाद लम्बिएपछि एआईजीका केही दरबन्दी थप गर्न लागिएको छ । एआईजीको दरबन्दी बढेपछि डिआईजीका थप पद रिक्त हुने भएकाले दरबन्दी थप गर्न लागिएको हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी १५ बाट चारमा झारिएको थियो । तर, केही डिआईजीहरु भने प्रदेशमै एआईजी राख्नुपर्ने भन्दै एआईजीको ८ वटा दरबन्दी थप्ने लबिङमा समेत लागेका छन् । विगतमा पनि एकपटक एआईजीलाई प्रदेशमा प्रमुख बनाएर खटाइएको दृष्टिमा खबर छ । संघीय संरचनामा प्रदेशमा डिआईजी कि एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी बनाउने अझै टुंगो लागेको छैन ।
उता सशस्त्र प्रहरीमा डिआईजी सुरज श्रेष्ठ एआईजीको दरबन्दी बढाउने खेलमा छन् ।
डिजिटल प्रविधिबाट जग्गाको कित्ताकाट: एक इन्चपनि तलमाथि नहुने, आकाशमा घाम लागेको बेला नक्साको फाइल खोज्नुनपर्ने !
काठमाडौं। आज भन्दा एक वर्ष अघिसम्म धेरै जसो नापी कार्यालयले जग्गाको…
काठमाडौं । कामदार भिसामा मलेसिया उड्न लागेका २९ जनालाई शुक्रबार विमानस्थल अध्यागमनले फिर्ता पठाई दिएको छ ।
एक किशोरीले रुँदै भनिन्, आमा ! म छाउगोठ जानै पर्ने हो ?
वीरेन्द्रनगर । पहिलोपटक महिनावारी भएकी रिनाले छाउगोठ बस्न मानिनन् तर जसरी पनि त्यहाँ गएर बस्नैपर्ने घरपरिवारको दबाब आएपछि उनले…
अनुहार चम्काउन कुकुरको पिसाव पिउँछिन् यी महिला
एजेन्सी । गाईको मुत्रलाई गहुँत भन्दै खाने चलन हाम्रो नेपाली समाजमा कुनै नौलो कुरा होईन । तर, एकजना महिलाले…
नेपाली शेष घले अष्ट्रेलियाका ८१ औं धनी व्यक्ति
काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा रहेर व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली जोडी शेष घले र जमुना घले यस वर्ष अष्ट्रेलियाको ८१ औं…
सुनको मुल्यले अहिलेम्मकै रेकर्ड तोड्यो, आज १५ सयले बढेर ८० हजार नाघ्यो 37 views
चीनमा कोरोनाका कारण मर्नेको संख्या २५ सय नाघ्यो 11 views